Japan oo Soomaaliya u tababareysa saraakiil ka tirsan ciidanka badda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Japan ayaa Soomaaliya u tababareysa saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada badda, waxaana tababarkaasi ka dhacayaa dalka Japan.
Tababarkaan waxaa fulinaya hay’addeeda horumarinta Japan International Cooperation Agency (JICA), waxaana arrintaan loo arkay in Japan dib u bilowday taageerada dhinaca tababarrada ah ee ay u fidineyso saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Saddex sarkaal oo ka kala tirsan xafiiska raysul wasaaraha, wasaradda amniga iyo ciidanka booliska ayaa lagu wadaa in ay maanta gaaraan Japan si ay uga qayb galaan tababar la xariira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta badaha.
War-saxaafadeed ka soo baxay hay’adda JICA ayaa lagu sheegay in saddexda sarkaal ay noqonayaan kuwii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo ka qayb gala tababar lagu qabanayo Japan tan iyo sanadkii 1990.
Hay’adda ayaa xaqiijisay in uu tababarka oo socon doona muddo 3 toddobaad ah uu xoojin doono awoodda ilaalinta shuruucda badaha, gaarsiin doonana heer caalami ah.
Cabdikariim Maxamed oo ka tirsan saddexda sarkaal ee Soomaaliya ugu qayb galaya tababarka la xiriira shuruucda caalamiga ah ee badaha ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in iyagoo matalaya Soomaaliya ay ka qayb galaan tababar ay ka faa’ideysanayaan saraakiil ka kala socota ilaa siddeed wadan.
Japan ayaa horay booliska Soomaaliya u gudoonsiiyey ku dhawaad 20 gaadiid iyo qalab kala duwan oo ay adeegsadaan ciidamada booliska.